Golaha amaanka ee QM oo war ka soo saaray xaaladda Soomaaliya | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Golaha amaanka ee QM oo war ka soo saaray xaaladda Soomaaliya
Golaha amaanka ee QM oo war ka soo saaray xaaladda Soomaaliya
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midobay ayaa soo dhaweeyay shirka madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, uu ku baaqay in bartamaha bishan ay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul-goboleedyadu isugu yimaadaan magaalada Garoowe ee xarunta maamul-goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland.
War qoraal ah oo uu soo saaray golaha Amniga QM ayaa lagu sheegay in goluhu soo dhaweynayo wadahadallada cusub ee lagu baaqay 15-ka Febraayo.
Warbixintaasi ayaa sidoo kale ugu baaqday hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay dib u billaabaan wadaxaajoodka isla markaana ay ka wada shaqeeyaan danaha shacabka Soomaaliyeed oo ay ka heshiiyaan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho loo wada dhan yahay.
Golaha ayaa go’aankaan qaatay kaddib markii uu warbixin ku saabsan xaaladda Soomaaliya ka dhageystay wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsana rimaha dalka Soomaaliya, James Swan.
Go’aankan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa soo baxay saacado un kaddib markii maadxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo uu soo jeediyay in 15-ka bishan shir kale lagu qabto magaalada Garoowe, shirka uu Madaxweynuhu sheegay inuu dhammaystir u noqonayo heshiiskii doorashooyinka ee 17-Sebteembar 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Previous articleHoggaamiyaasha maamullada Puntland iyo Jubbaland oo dalbaday in Muqdisho lagu qabto shirka uu MD Farmaajo ku baaqay
Next articleBooliska oo lagu amray in ay si buuxda u dhaqan geliyaan amarrada ka dhanka ah COVID-19